Yonke into omele uyazi ngePregabalin -Buyaas
Pregabalin (I-148553-50-8) sisiyobisi esona sithengiswa kakhulu phantsi kwegama lophawu u-Lyrica kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Ngaba liyeza elichasene ne-epileptic ekwabizwa ngokuba yi-anticonvulsant. Eli chiza lisetyenziselwa ukunciphisa isantya sobuchopho esikhokelela ekubanjweni. Kwelinye icala, iPregabalin ichaphazela iikhemikhali zobuchopho ezithumela imiqondiso yeentlungu kuyo yonke imithambo-luvo yomzimba. Eli chiza likwasetyenziswa kwilizwe lonyango ukunyanga iintlungu ezahlukeneyo ezibangelwa zizifo ezahlukeneyo ezinjengentlungu yentliziyo ebangelwa yi-fibromyalgia, isifo seswekile, kunye nentlungu yomonzakalo wentambo.
I-Pregabalin (148553-50-8) inokusetyenziswa kunye namanye amayeza ukunceda unyango lokuthathwa kwesi sifo kubantwana abaneminyaka yobudala emi-4 kunye nabantu abadala nabo. Kwiminyaka emininzi ngoku, eli chiza belidlala indima ebalulekileyo kwilizwe lezonyango, lisenza libe lelona chiza linamandla lokunciphisa iintlungu kwintengiso. Iyeza kufuneka lithathwe kuphela phantsi kokuyalelwa ngugqirha ukufumana iziphumo ezingcono. Nangona kunjalo, uhlala uqinisekisa ukuba ufumana iPregabalin kumthengisi othembekileyo okanye umenzi ojikelezileyo.
E-United States yaseMelika, iPregabalin ivunyiwe ukuba isetyenziswe kunyango lwezifo ezifana;
Apha, umthamo wokuqala wePregabalin yi-165mg ekufuneka ithathwe kanye ngosuku, kwaye kuyacetyiswa ukuba uyithathe emva kwesidlo sangokuhlwa. Kukho amathuba okuba umthamo wonyuswe uye kwi-330mg kwiveki yokuqala yomjikelo wethamo. Emva kweeveki ezimbini okanye iiveki zonyango kwaye akukho phuculo lubalulekileyo kwiinhlungu emva koko ugqirha wakho unokuphakamisa umthamo ukuba uphezulu kangakanani i-660mgs ngemini. Xa utshintsha imithamo, thabatha ekuseni ukuze ukhuphe ngokukhawuleza emva koko uqalise ukusebenzisa iyeza emva kokuthatha isidlo sakho sangokuhlwa.
Apha idosi yokuqala yi-75mg ithathwe kabini ngemini kwaye inokulungiswa kwi-150mg kabini ngosuku kwiveki yokuqala yethamo. Umthamo unokunyuswa ngakumbi kwi-225mg ukuba ithathwe kabini ngemini. Elona nani liphezulu le-fibromyalgia yi-450mgs kunye nomthamo wolondolozo malunga ne-300mg ukuya kwi-450mg. Ngakolunye uhlangothi, izifundo zibonisa ukuba ukuthatha i-600mgs ngemini akuniki zibonelelo zePregabalin ezongeziweyo kodwa kunokubangela iziphumo ezibi kakhulu.
Iintsuku zokuqala zedosi zinika ugqirha wakho ithuba lokuvavanya inkqubela phambili yakho ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokulungelelanisa umthamo ezantsi okanye ngaphezulu. Izifundo zibonakalisa ukuba ulindele iziphumo kwiintsuku ezimbalwa zokuqala zedosi. I-Pregabalin sisiyobisi esisebenza ngokukhawuleza, kwaye ke, kufanelekile, ulindele ukuba iintlungu zikhululeke ngaphakathi kwiintsuku zokuqala zedosi. Kwimeko apho ungafumani naluphi na uphuculo kwiveki yokuqala yokuthatha idosi yakho, yazisa ugqirha wakho ukuba alungelelanise umthamo weziphumo ezilungileyo. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ayizenzekeli ukuba ufumane iziphumo ngokukhawuleza njengoko abanye beza kwenza. Ngokuxhomekeke kwimeko yokuba uphantsi kweyeza, iziphumo ziya kwahluka. Ezinye zezinto eziqhelekileyo Iziphumo zePregabalin zibandakanya;
Imfihlo yomgangatho weziphumo zePregabalin kukubandakanya ugqirha wakho kwinkqubo yonke yethamo. Musa ukulungelelanisa umthamo wePregabalin ngaphandle kokuchazela iyeza lakho. Kangangoko unokuthenga ngokulula isiyobisi kwiivenkile ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi, ungaqali ukusithatha ngaphandle kokuya kuvavanyo lwezonyango. Eli chiza sele linamandla ekuncedeni iintlungu ezibangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Abanye iimbaleki basebenzisa iPregabalin ukulawula iintlungu zemisipha, kunye neentlungu zomgogodla, eziqhelekile ngenxa yokusebenza ngamandla nokhuphiswano.
6.I-Pregabalin isiqingatha sobomi
Esi sisidakamizwa esikhawulezayo esisebenzayo esisebenzayo I-Pregabalin isiqingatha sobomi yeeyure ze-6. Ke ngoko, kwiziphumo ezingcono zePregabalin, iidosi kufuneka zahlulwe kubini okanye ezintathu ngemini. Ukuba sisiyobisi somlomo, kwenza ukuba kube lula kuwe ukufumana iziphumo kuba unesiphelo esifutshane sobomi. Ngalo lonke ixesha khumbula ukunamathela kwimiyalelo yemithamo enikezwe ngugqirha. Nokuba uthatha eyona dosage iphantsi okanye iphakamileyo, isiqingatha sobomi beli chiza lihlala lifana.
Njengamanye nje amachiza kwintengiso namhlanje, iPregabalin inokukwazisa nangeziphumo ebezingalindelekanga ezimbi ukuba uyisebenzisa kakhulu. Uninzi lwe Iziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin Kungenxa yokusetyenziswa gwenxa okanye ngamanye amaxesha xa inkqubo yakho yomzimba iphikisana kakubi neyeza. Yiloo nto kusoloko kucetyiswa ukuba uqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokuthi emva koko zihlengahlengiswe ziinkqubo zakho zonyango emva kokujonga indlela umzimba wakho ophendula ngayo kunyango. Ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin zibandakanya;
Iindaba ezimnandi zezokuba zonke ezi ziphumo zisemngciphekweni wePregabalin zinokulawulwa ukuba wazisa ugqirha wakho ngexesha nangona ezinye iimeko ziya kunyamalala kunye nexesha xa ufumana iziphumo eziphambili ezichazwe apha ngasentla ungaqhubeki nokuthatha umthamo ngaphandle kokuzazisa ngamayeza akho. Ugqirha wakho unokugqiba ekubeni ayeke umthamo ukuba imeko ayilawuleki okanye unokucebisa ngenye indlela, amayeza akhuselekileyo kuwe.
Unako lula Thenga umgubo wePregabalin ngobuninzi okanye yanele nje ukuba umjikelo wakho wethamo usuka kwiivenkile ezahlukeneyo ze-intanethi okanye ikhemisi ekufutshane kuba isemthethweni kwiindawo ezininzi zehlabathi. Ugqirha wakho uya kuba ngumntu olungileyo ukukubonisa ukuba uza kuyithenga phi. Oku kwenza ukuba kube lula kuwe ukuba uthenge kwaye ulisebenzise ichiza ngaphandle koloyiko lokungqubana nomthetho.
Ukujonga uphononongo olwahlukeneyo lwePregabalin, kucacile ukuba abasebenzisi abaninzi banelisekile ziziphumo abazifumanayo emva kokuthatha iyeza. I-Pregabalin isetyenziswa rhoqo njengechiza lokunciphisa iintlungu, kwaye ifumene ingxelo entle evela kubasebenzisi abaninzi. Abaphandi bezonyango baphinde bafaka iziphumo ezahlukileyo, kwaye yiyo loo nto i-FDA ivume ukuba isetyenziswe kunyango lwe-Epilepsy, ne-post-herpetic neuralgia okanye kubuhlungu obuvela emva koshingles, iswekile ye-neuropathy ye-neuropathy kunye ne-Fibromyalgia.
Umhlaba uyatshintsha, kwaye namhlanje, unako bathenge i-Pregabalin powder kwi-intanethi kwiqonga lethu ngexabiso elifikelelekayo. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka lula, isenza kube lula kuwe ukuqhuba usuka kwenye imveliso uye kwenye kunye nokwenza iodolo yakho ngemizuzwana. Unokufikelela kwiwebhusayithi yethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, okanye ikhompyuter yakho. Ngaphezulu koko, senza uhlangulo kwihlabathi liphela kwaye ngexesha elifutshane kakhulu. Ungathenga iPregabalin ngobuninzi okanye nokuba yanele nje kumjikelo wakho wethamo.
Siphambili kumthengisi wePregabalin kwingingqi, kwaye amaxabiso ethu anokungabeki umgangatho weemveliso zethu. Sinikezela ngeemveliso ezahlukeneyo zonyango ezisemgangathweni kwivenkile yethu ekhompyuter. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa bonke abathengi bethu ukuba baqiniseke ukuba bangeniswa kunyango ngaphambi kokuba baqale ukuthatha iimveliso zethu. Iimveliso zethu zonyango zinokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga xa zisetyenziswe gwenxa okanye zisetyenziswe ngokweqile. I-Pregabalin iyathengiswa Ikwafumaneka kwikhemesti ekufutshane kodwa qiniseka ukuba uyifumana kumthengisi onokwethenjelwa. Ayizizo zonke iivenkile ezikwi-Intanethi okanye ezomzimba ezibonelela ngemveliso esemgangathweni.
Nangona kunjalo, i-Pregabalin (148553-50-8) ayivunyelwanga unyango lwexhala e-US, nangona kukho iingxelo zokuba abanye abasebenzisi bayisebenzisa ngaphandle kwelebheli ukulawula imeko. Kwezinye iindawo zehlabathi njengaseYurophu, iPregabalin yamkelwe kunyango loxinzelelo kubantu abadala. Kukho neengxelo ezingangqiniswanga zokuba iPregabalin inokusetyenziswa ukulawula ukudakumba. Ngolwazi oluthe kratya malunga nePregabalin, nxibelelana nodokotela wakho okanye uqhagamshelane nosokhemesti wakho.
I-Kim, i-SC, i-Landon, i-JE, kunye noSolomon, i-DH (2013). Iimpawu zeklinikhi kunye nokusetyenziswa kwamayeza phakathi kwezigulana ze-fibromyalgia ezisandula ukumiselwa i-amitriptyline, duloxetine, gabapentin, okanye i-pregabalin. Ukhathalelo lwamayeza kunye nophando, 65(11), 1813-1819.
Umhle, CW, & Brett, AS (2017). UGabapentin kunye ne-pregabalin yentlungu-iyonyuka ichaza isizathu sokuxhalaba? I-New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ukusebenza kwePregabalin kwintlungu ye-postoperative yokomelela phantsi kweendidi ezahlukeneyo zokuhlinzwa: uhlalutyo lwe-meta. iyeza, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). I-Pregabalin yonyango lwexhala lokuphazamiseka ngokubanzi: uhlaziyo. Isifo se-Neuropsychiatric kunye nonyango, 9, 883.